मन्त्रीले गरे जुत्ता पसलको उद्घाटन ! – Life Nepali
मन्त्रीले गरे जुत्ता पसलको उद्घाटन !
पोखराको सभागृहचोकमा प्रदेशका एक मन्त्रीले जुत्ता पसलको उद्घाटन गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले सभागृहचोकको देवगंगा शुज सेन्टर नामक जुत्ता पसलको उद्घाटन गरेका हुन्। आइतबार बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको कार्यक्रममा मन्त्री करिब २ घण्टा ढिलो गरी आएका थिए।
पत्रकार उपस्थित भएको भन्ने खबर पाएपछि उनले कार्यक्रममा आउन आनाकानी गरेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि पसल सञ्चालकले धेरै दबाब दिएपछि उनी आएका हुन्। उद्घाटनपछि उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए। रन शुज नेपालकै उत्पादन भएकोले आफूले प्रवद्र्धनको लागि पसल उद्घाटन गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले नेपालमा पछिल्लो समय उत्पादन बढेको र विदेशी सामानको आयात कम भएका कारण व्यापार घाटा कम भएको बताए।
‘अहिले हाम्रै देशमा उत्पादन भएको छ। विदेशी आयात घटेको छ। जसका कारण भन्सार तिरेर पहिले धेरै आन्तरिक आम्दानी हुन्थ्यो। अहिले घटेको छ,’ उनले भने, ‘हामी जुत्ताको उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएका छौं। यसपालि सरकारको बजेट पनि घट्न सक्छ।’ कार्यक्रममा पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले स्वदेशमै रोजगारी गर्दा देश विकासमा योगदान पुग्ने बताए। पसल सञ्चालनका लागि ५० लाख हाराहारीमा लगानी भएको सञ्चालक हर्क लामिछानेले बताए।
Previous प्रदेश ३ को नाम बाग्मती प्रदेश राजधानी हेटौंडा”बहुमतले पारित
Next दाजुबहिनी नै मृगौला पी’डित, पैसा नभएर उपचार भएन ! शक्दो शेयर गरि मद्दत गरौँ